RAKOTOARIVELO MAMY : TOKONY HO TAZONINA NY TETIANDROM-PIFIDIANANA – MyDago.com aime Madagascar
Taorian’ny fanambaran’ingahy Rajoelina fa tsy hilatsaka hofidiana izy dia maro ny fanehoankevitra maro samihafa eto amin’ny firenena. Ho an’ny Ankolafy Ravalomanana dia nambaran’ny filohan’ny Ct Rakotoarivelo Mamy, tetsy Bel’Air io atoandro io, fa nisy ny fihetsika marobe nasehon-dRajoelina hoe vonona hilatsaka izy nefa taty aoriana dia nilefitra ihany teo anoloan’ny recommandation napetraky ny Sadc izay milaza fa tsy tokony hilatsaka izy roalahy. Mahavariana hoy Mamy fa betsaka ny sinema, ny fanenjehana ny fikambanana iraisam-pirenena hoe tsy tokony hitsabaka amin’ny raharaham-pirenena. Fihetsika feno fihantsiana ihany izany nefa nanao ireny ihany taty aoriana. Na izany na tsy iznay hoy ity olomboantendry ity dia fihetsika feno fitoniana politika ihany izany. Ny tena zavadehibe ho anay Ankolafy Ravalomanana hoy izy dia ny fampiharana ny antsakany sy andavany ny tondrozotra iray manontolo indrindra ny andininy faha 16,17,20 izay hitakiana ny fiverenan’ny filoha Ravalomanana Marc haingana eto an-tanindrazany alohan’ny fifidianana. Nisy ny sosokevitra naroson’ny filohan’ny fat hoy izy milaza fa hoe ny fifidianana solombavambahoaka no atao aloha. Aminay Ankolafy Ravalomanana hoy Mamy Rakotoarivelo dia efa neken’ny rehetra ireny hatramin’ny nanoloran’ny Cenit ny datim-pifidianana. Raha izao indray hoy izy no misy fanamboarana dia ny fandaharam-potoanan’ny Cenit no voatery hisy fanamboarana. Heverinay hoy izy fa tsy fotoanan’ny paik’ady politika izao fa efa ela no niandrasantsika io fifidianana io. Aminay dia tokony ho tazonina io datim-pifidianana filoham-pirenena sy solombavam-bahoaka io araka ny lamina nifanarahan’ny rehetra.
Auteur Solo Razafy*Publié le 16 janvier 2013 Catégories Politique
4 pensées sur “RAKOTOARIVELO MAMY : TOKONY HO TAZONINA NY TETIANDROM-PIFIDIANANA”
Atodio kely any amin’ny zavatra imasoan’i Dolin Rasolosoa – Ratsirahonana – Voninahitsy – Pety Rakotoniaina ny masonao Atoa Mamy Rakotoarivelo, Filohan’ny CT………..
Dia ho hitanao fa efa mikarakara mafy izay fomba rehetra HANAKANANA an’i Dada TSY HO AFAKA HO FIDIANA MIHITSY no tanjona kendren’ ireo ankehitriny. Zavatra tsy tokony hagaga satria ao ny AV7 TERRORISTES tarik’i Domelina.
Tena ny soa ho an’ny vahoaka tokoa no kendrenao miaraka amin’i Dada, ka misaotra anao hatrany e ! Avelao hanenjika izay hanenjika fa ihomehezantsika fotsiny e !
« Avelao hanenjika izay hanenjika fa ihomehezantsika fotsiny e ! » Ny foza dia manao fananjehana mba hanampotika anao fotsiny, ny fisianao fotsiny dia lasa olana amin-dry zareo. Fa ny fanotaniako dia ity, INONA no atao mba TENA hanoherana an-dRajoelina ? valio @ fo tony fa tsy resaka foza io. Hatr@ izao aloha dia ireto no mitranga : Fanilihana, Fivavavahana, Fananakanana ny fidinanana an-dalaambe, tsy fisian’ny paik’aida, ary fiaraha-miasa @ mpangalatra…
Raha ny hevitra voalazan’i mamy Rakoarivelo eto dia tena hisaisana toako , fa inona ary no ataohanantarehana izany ? Izay ilay adidy mbola tsy vita na tsy natomboka mihitsy aza.
Misaotra betsaka aloha nametraka ny fanontaniana amiko MIVANTANA, fa efa leo ity resaka KakaMerda ity raha izaho manokana.
Heveriko fa zafatra roa no hafahana mandray ny fitondràna :
Ny FILAZAM-BAOVAO : io no hery alain’izay Mpanongana rehetra teto an-tany . Tsy vitan’izany fa na izay FITONDRANA vaovao rehtra koa dia , mbola io hery io ihany no ianteherany.
– Tsarovy fa vao nanomboka ny Fanoganam-panjakana dia ny Radio sy ny Telvision no zavatra voalohany NOPOTEHINY, miampy ireo FILZAM-BAOVAO niantehatra na nifandray tamin’ny Fitondran’i Ravalomanana
Ka raha misy fomba hanakanana an’i TGV tsy hamoaka vaovao amin’ny Radio sy Telvision dia efa HERY MATANJAKA LEHIBE DIA LEHIBE IZAY.
Hezaka amin’ny FIRAISAN-KINA no fomba matotra indrindra hanetsika ny vahoaka : Raha mbola misy ireo mivoy resaka manaratsy an’ireo MPITARIKA toa an’i Mamy Rakotoarivelo,
TSY HISY NY FIRAISAN-KINA, ary fifaliana ho an’ireo mbola manohana ny Mpanjanaka hampihinana ny sty fihinana an’i malagasy. Ny fanotaniana mansty dia hoe : iza no diso : ny mampihinana sa ny mihinana ? ny valiny dia ireo manosika sy mila tambitamby avy amin’ny Mpampihinana. Ny vazaha sy Rajoelina no Mpampihinana, ny malagasy no nolazaina fa faly mihinana, ary ireo MPAMPORISIKA MAMPIHINANA ? Ireo no tena diso, anefa ireo no manao gisalahy mangala-ketsa satria efa zatra niosana.
Efa samy nahita ny zava-doza nataon’ny HAT-Rajoelina
Samy mahalala TANTERAKA ny fikorosàn’ny Firenena, anefa dia milefitra noho ny herin’ny VOLA hatrany.Noho no ny herin’ny vola avy @ Mpanjanaka
Ny vahoaka tsy mba azo vidiana ary tsy misy afaka ny hanohitra azy rehefa VONONA IZY.
Misy miseho ho mahalala an’itsy sy iroa, fa NY MARINA dia ny FIRAISAN-KINA no nahavonjy ny Toniziana ny Vietinamiana, ny Indoneziana ny Bôlivana sy ny sisa.
Rehefa mitambatra ny vahoaka, fa tsy misy Mpamingana toy ireo mivoy hevitra handabohana an’i Mamy Rakotoarivelo ireo, dia izay no vaha-olana.
Raha bangoina ny MBA hevitro LAZALAZAO dia izay.
Noho izaho namoaka ny tena hevitro dia heveriko fa tsara ho ahy ny mandao tanteraka ity tranonkala ity, satria ho resaka KakaMerda (Bogor io ! Tsy « tena » olona adala ilay iny ka ! ) no ho valiny.
Ka dia mahereza daholo e !
Mbola mahamenatra foana izany maha Malagasy izany raha dinihiny. Mifaly amin’ny FANDABOHANA ny hafa fotsiny, anefa tsy misy atao fa ny wawawa no betsaka.
MITOHY NY TOLONA ARY MIHAMZANA KOA AOKA TSY HIRAVIRAVY TANANA ISIKA !
MOMBA ANTSIKA LALANDAVA ANDRIAMANITRA !
Précédent Article précédent : DECLARATION DE LA SADC SUR LE MADAGASCAR
Suivant Article suivant : FILOHA RAVALOMANANA MARC : TSY HISY FIFIDIANANA IZANY ETO RAHA TSY TONGA ANY IZAHAY